Himalaya Dainik » कोरोना मुक्त भएपछि दुबोको माला लगाएर विदाई !
कोरोना मुक्त भएपछि दुबोको माला लगाएर विदाई !
सिन्धुली — सिन्धुली अस्पतालबाट तीनजना पुरुष कोरोना भाइरसको सं क्रमणबाट मुक्त भएपछि सोमबार घर फर्किएका छन् । २२ दिनसम्म आइसोलेसन कक्षमा रहेका उनीहरुको पीसीआर परीक्षण नतिजा निगेटिभ आएपछि सिन्धुली अस्पतालले बिदाइ गरेको अस्पताल व्यवस्थापक विमल श्रेष्ठले बताए ।
सं क्रमित हुँदाको व्यवहार र अस्पताल कर्मचारीहरुले गरेको हेरचाहले लक्षण नै नदेखिई कोरोना भा इरस मुक्त हुन सफल भएको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तीनैजनालाइ घरसम्म पुग्नका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले यातायातको व्यवस्था समेत गरिदिएको छ ।
प्रजिअ एवं विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र पाण्डेले कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका तीनैजनालाई समाजमा सचेतना फैलाउन र आफ्ना अनुभव सुनाउन सुझाएका छन् । यो खबर कान्तिपुरमा राजकुमार कार्कीले लेखेका छन् ।
तस्बिर : राजकुमार कार्की/कान्तिपुर